बाग्म‍ती प्रदेशस्तरीय सहकारी संघहरुको भ्रमण टोली
दोलखा । बाग्म‍ती प्रदेशस्तरीय सहकारी संघहरुको प्रतिनिधिमूलक टोलीले आज दोलखामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ । बाग्म‍ती प्रदेश भित्रका जिल्लामा रहेको जिल्लास्थित सहकारी संघहरुसँग अन्तरक्रिया तथा अध्ययन गरिरहेको टोलीको नेतृत्व राष्ट्रिय
लेखापालन, कानुनी व्यवस्था तथा बजारीकरण तालिम
काठमाडौं । नेफ्स्कूनको व्यवसाय विकास सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौंको स्वयम्भूस्थित हाम्रो एकीकृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का १० जना महिला उद्यमी सदस्यहरूलाई लेखापालन, कानुनी व्यवस्था तथा बजारीकरण सम्बन्धी
वित्तीय कानुनसम्बन्धी जनसचेतनको प्रशिक्षण
दोलखा । दोलखा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको जनसचेतन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि सहकारी तथा वित्तीय कानुनका बारेमा एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
चुरे जैविकमार्गको सेवा केन्द्र विस्तार
कञ्चनपुर । सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित चुरे जैविकमार्ग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. ले बेदकोट नगरपालिका–९, लालपुरमा पहिलो सेवा केन्द्र सुरु गरेको छ । सेवा केन्द्रको उद्घाटन बेदकोट न.पा.–९ का अध्यक्ष
सितापाईलाले सुरु गर्यो क्यूआर कोड सेवा
काठमाडौं। सीतापाईला स्थित सितापाईला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले नगद रहित कारोवार सुरुवात गरेको छ । संस्थाको २२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा क्यूआर कोड सेवा शुभारम्भ गरिएको हो । सदस्यलाई
स्थिरिकरण कोषको सञ्चालनमा सामूहिक ऐक्यबद्धता
चितवन । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापित स्थिरिकरण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन प्रति चितवनमा सहकारी अभियन्ताहरुबीच सामुहिक ऐक्यबद्धता जाहेर भएको छ । नेफ्स्कून चितवन फिल्ड कार्यालयको आयोजनामा
लेखापालन, कानुनी व्यवस्था तथा बजारीकरण तालिम सम्पन्‍न
काठमाडौं । बल्खुस्थित महिला शक्ति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आयोजना तथा एसियाली ऋण महासंघ अकु र नेफ्स्कूनको प्राविधिक सहयोगमा व्‍यवसाय विकास सेवा अन्तर्गगत लेखापालन, कानुनी व्‍यवस्‍था तथा बजारीकरण तालिम
क्षमता अभिवृद्धि तालिम (CUDCC) सम्पन्‍न
काठमाडौं । नेफ्स्कूनको प्राविधिक सहजीकरणमा सामूहिक विकास साकोस, रुपन्देहीको सञ्चालकहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (CUDCC) आज सम्पन्न भएको छ । फागुन ४ गतेदेखि पोखरामा सञ्चालित ४ दिवसीय उक्त तालिममा संस्थाका सञ्चालक
अध्यक्ष र सचिवका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम
बर्दिया । जिल्लाको ठाकुरबाबा नगरपालिका भुरिगाउँस्थित सिको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सिको जिविकोपार्जन क्लबका अध्यक्ष र सचिवलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरेको छ । आज आयोजित एक दिवसीय उक्त
वैदिक गुरु परम्पराबाट आएको भावातीत ध्यानका विषयसँग सम्बन्धित सामग्री सङ्कलन गरी तयार पारिएको भावातीत ध्यान विशेषाङ्क सार्वजनिक गरिएको छ ।नेपाल महर्षि वैदिक फाउण्डेसनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वामी ज्ञानानन्द